XASAASI: Gabre oo Farmaajo & Kheyre ku Tilmaamay Aragagaxiso, Amaana u soo jeediyay Nabad sugida – XAMAR POST
XASAASI: Gabre oo Farmaajo & Kheyre ku Tilmaamay Aragagaxiso, Amaana u soo jeediyay Nabad sugida
Diplomaasiga Ethiopianka ee Jeneral Gabre ee La-taliyaha dhinaca Siyaasadda u ah Urur-gobaleedka IGAD ayaa la sheegay inuu Bartiisa Twitterka ku faafiyey sida uu ula dhacsan yahay qaabkii ay DFS ugu soo gacan-gelisay Dowladda Ethiopia, C/kariim Sheekh Muuse “Qalbi-dhagax” oo ka tirsan Saraakiisha Jabhadda ONLF,
Shabakadda Wararka Horn Observer ayaa soo daabacday 2 qoraal oo uu Jeneral Gabre mid ku ammaanay Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee NISA iyo mid uu ku eedeeyey Madaxweynaha iyo Ra’isul-wasaaraha inay taageeraan waxa uu ugu yeeray Argagixiso, waa sida uu Jeneral Gabre ku soo qoray Twitterkiisa.
Kudos ku socota NISA oo Ethiopia u soo gacan-gelisay Argagixisaha ONLF, Maya mahadnaq ku socota Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’isul-wasaare Kheyre” ayuu General Gabre ku soo qoray Bartiisa Twitterka, sida aynu ka soo xiganay Horn Oberserver.
Jeneral Gabre oo ahaa Ergaygii Gaarka ee Dowladda Ethiopia ugu qaabilsanaa Arrimaha Somalia, waxa kale oo uu Twitterkiisa ku eedeeyey Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’isul-wasaare Kheyre oo uu ku tilmaamay inay taageeraan Argagixisadda ONLF, waa sida uu hadalka u dhigay.
Xeeldheerayaal badan oo ay soo xigatay Shabakadda Horn Observer ayey ku sheegeen Tallaabadda Sarkaalka ONLF loogu gacan geliyey Dowladda Ethiopia tahay fal la sii qorsheeyey oo la doonayo in DFS lagu carqaladeeyo Siyaasad ahaan.
Dhinaca kale, Dowladda Ethiopia waxay Jimcihii xaqiijisay in loo soo gacan gelisay C/kariim Sheekh Muuse o oah Satkaal sare oo ka tirsan Jabhadda ONLF.
Tallaabadaasi waxay Xiisad iyo Guux ballaaran ka dhex abuurtay dadka isticmaala Baraha Bulshadda, kuwaasi oo Aragtiyo kala duwan isweydaarsada.
Xildhibaano iyo Siyaasiyiin ku kala aragti duwanaaday arrinta Qalbi dhagax
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo ka hadlay cod sir ah oo laga duubay